Ahlusuna oo loo oggolaaday 20 xildhibaan in ay ku yeshaan Baarlamaanka Galmudug – Kalfadhi
Wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-heshiisiinta Soomaaliya ayaa maanta soo saartay war-murtiyeed ay shaacineyso heshiis dhab ah oo laga gaaray arrimaha Galmudug.
Wada hadalo maalmihii la soo dhaafay u socday Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka iyo Hoggaanka Ahlusuna ayaa ugu dambeyntii waxaa laga soo saaray heshiis dhinacyadu ay gaareen, iyadoo la xaliyay tabashooyinkii dhanka Ahlusuna iyo caqabadihii ku hor-gudbanaa geeddi socodka dhismaha maamulka Galmudug.
Ahlusuna ayaa loo oggolaaday 20 kursi oo Xildhibaanno oo ah oo ay ku lahaan donaan Baarlamaanka Galmudug, kaasoo ka imaanaya 89 kursi ee Baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug, waxaana qodobkan ahaa kan ugu weynaa ee ay isku hayeen dowladda Federaalka iyo Ahlusuna, maadaama Ahlusuna dalbaneysay in la siiyo 35 kursi oo qeyb ka ahaa heshiiskii hore.
Wada hadaladan u socday dowladda Federaalka iyo Ahlusuna ayaa waxaa mira dhalkiisa gacan ka geysatay Beesha Caalamka oo ku cadaadineysay dowladda Federaalka inay tixgeliso tabashada Ahlusuna.
Dhimaha maamulka Galmudug, ayaa waxaa bilihii lasoo dhaafay hareeyay khilaaf xooggan oo u dhaxeeyay dowladda federaalka iyo Ahlusuna, waxaana wasaaradda ay sheegtay in dhawaan la dhammeystiri doono dhismaha maamulkaasi.